भर्खरै भारतमा चल्यो रुवा'बासी, यतिठुलो ब'ज्र'पात, १५ जनाको एकै झ'ट्कामा मृ*त्यु, India -
Home News भर्खरै भारतमा चल्यो रुवा’बासी, यतिठुलो ब’ज्र’पात, १५ जनाको एकै झ’ट्कामा मृ*त्यु, India
भर्खरै भारतमा चल्यो रुवा’बासी, यतिठुलो ब’ज्र’पात, १५ जनाको एकै झ’ट्कामा मृ*त्यु, India
बेलायतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भएको छ। डिसेम्बरमा कुल संक्रमितको दुईतिहाइमा नयाँ भाइरस पाइएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
बेलायतमा सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक एक बिरामीमा नयाँ भाइरस संक्रमण पाइएको थियो। जसको पुष्टि भने अक्टोबरमा मात्रै भयो। लकडाउनको अवस्थामा अन्यत्र संक्रमण नियन्त्रण हुँदै गए पनि केन्ट क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि वैज्ञानिकले अध्ययन थालेका थिए। सोही अध्ययनले नयाँ स्वरूपको भाइरस पुष्टि गरेको हो।
यसबारे नयाँ–नयाँ तथ्य उजागर हुने क्रम जारी छ। आवश्यक अध्ययन र परीक्षण भइरहेका कारण यो भाइरसको संक्रमण, असरलगायत विभिन्न सवालमा धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई आधार बनाएर बेलायती वैज्ञानिकले बताएअनुसार नयाँ भाइरसको फैलावट तीव्र छ। सामान्य भाइरसको तुलनामा यो भाइरस ७० प्रतिशतभन्दा बढी तीव्र दरमा फैलिरहेको छ।
यसको असर भने पहिलाको तुलनामा बढी घातक रहेको पुष्टि भएको छैन। नयाँ भाइरसको संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने वा ज्यानै गुमाउने व्यक्तिको दर पनि पहिलाभन्दा बढी पाइएको छैन।
बेलायतमा कोभिड खोप लगाउन सुरु गरिसकिएको छ। नयाँ भाइरसको हकमा यी खोपले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर स्पष्ट भइसकेको छैन। वैज्ञानिक र कोभिड खोपका निर्माता नयाँ भाइरसका लागि पनि खोपले काम गर्नेमा आशावादी देखिएका छन् । यससम्बन्धी परीक्षणको नतिजा आउन अझै केही दिन लाग्नेछ।
बेलायतमा देखिएको नयाँ भाइरस विश्वभर फैलिएको छ। बेलायतमा नयाँ भाइरस भेटिएको चर्चासँगै धेरै मुलुकले बेलायतसँगको यात्रा प्रतिबन्ध घोषणा गरे। नेपालसहित कैयौं मुलुकमा बेलायतबाट यात्रा गर्न रोक छ। यस्ता प्रतिबन्धका बाबजुद भाइरस संक्रमण रोकिएन।
कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डा. ओम कुर्मीले समयको अन्तरालमा भाइरसको स्वरुप परिवर्तन हुनु सामान्य भएको बताए। कोभिडका हकमा पनि भाइरसका गुणमा परिवर्तन भएर नयाँ स्वरूप देखापरेको हो।
प्रवक्ता डा. गौतमले बेलायतबाट फर्किएकामध्ये ६ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकामा तीन जनामा नयाँ भाइरस पाइएको खुलाए। ‘कोरोना पोजिटिभ ६ जनामा देखिएको हो। जसमध्ये तीन जनामा नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो’, उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘तीन जनामध्ये दुई जना (२८ वर्षीया महिला र ३२ वर्षीया पुरुष) हिजै बेलायत फर्किसकेका छन्।’ नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका ६७ वर्षीय पुरुष घरमै आइसोलेसनमा छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले नयाँ प्रजातिको भाइरस संक्रमितको स्वास्थ्यमा जटिलता नदेखिएको बताए। ‘पुरानो कोरोनाभन्दा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस छिटो सर्छ। घरपरिवारका सबै सदस्य एवं नजिक रहेका व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ’, निर्देशक डा. राजभण्डारीले भने, ‘नयाँ भेरियन्टको कोरोनाको संक्रमणदर ७० गुणा बढी छ।’
नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमितमा सुरुवातमा रुघाखोकी बढी लाग्ने देखिएको छ। ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने र गन्ध थाहा नपाउनेलगायत लक्षण देखिने डा. राजभण्डारीले बताए। ‘दीर्घरोगी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता न्यून भएकाहरूलाई बढी असर गर्छ’, उनले भने।
नयाँ भाइरस संक्रमण देखिएसँगै बेलायतबाट हुने उडान र यात्रु आगमनलाई पुस पहिलो सातादेखि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेलायत र बेलायत ट्रान्जिट भएर आउने यात्रुलाई नल्याउन विभिन्न हवाई सेवालाई सर्कुलर गरेको थियो। त्यसअघि नै बेलायतबाट नेपाल भित्रिएकामध्ये केही व्यक्तिको स्वाब संकलन गरिएको थियो। मन्त्रालयले पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका नागरिकले अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न र प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो।
बेलायतमा असोजमा नयाँ भाइरस देखापरेको थियो। अहिले युरोप, अमेरिका र एसियाली मुलुकमा नयाँ भाइरस देखापरेको छ। यस भाइरसले संक्रमणको त्रास बढाएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले यसअघि आनुवंशिक संरचना अध्ययन गर्दा नेपालमा भेटिएको भाइरस भारत, बंगलादेश र साउदी अरबको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो पाइएको थियो।
सरकारले बेलायतबाट एक महिनाअघि स्वदेश फर्किएका व्यक्तिमा निगरानी बढाएको थियो। मन्त्रालयका वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेले बेलायतबाट फर्किएका २ सय ३५ जनालाई निगरानीमा राखिएको जानकारी दिए। ‘हामीले त्यति बेला निगरानी गरेका थियौं। तीमध्ये तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो’, डा. पाण्डेले भने।
मन्त्रालयले अझै सकेसम्म भीडभाडमा नजान, जानुपरे दुई मिटर दूरी कायम राख्न, बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउन, साबुनपानीले हात धुन र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। ‘जबसम्म यस रोगको नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म हामीले सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ’, मन्त्रालयले भनेको छ।
Previous articleभारतीय भूमिमा चीनले सिंगै गाउँ बनाइदियो,मिडियामा खै’लाबै’ला Arunachal Pradesh
Next articleभाइरल नविनालाई रमेश प्रसाईंले लाने | पत्रकारले दृस्टीबिहिन भनेपछि इन्द्रेणीमै जं’गीए रमेश Nabina KC